काठमाडौंमा कुन ठाउँको जग्गाको मूल्यांकन कति ? (सूचिसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
1201933 64716 890583 246634
काठमाडौंमा कुन ठाउँको जग्गाको मूल्यांकन कति ? (सूचिसहित)
११ असार २०७६, बुधबार १२:२५
देशकै राजधानी काठमाडौँ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र सात वटै महादेशका मानिस बस्ने ठाउँ । सुख सुबिधा, रोजगारी खोज्नेदेखि कुटनीतिक चलखेल गर्नेहरु समेत यही रुमलिएका छन् ।
त्यसैले यहाँको गाँस, बास र कपास महँगो छ । तर, पनि मानिसहरु काठमाडौँमै जीबन जिउने रहर पालेर पाइला खियाइरहेका हुन्छन्। झुपडी नै भए पनि काठमाडौँमा घर बनाउन चाहन्छन्, थोरै नै भए पनि जग्गा जमिनको जोहो गर्न चाहन्छन् । यदि तपाई पनि यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो सामाग्री तपाइलाई उपयोगी बन्न सक्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न १७७ ठाउँको जग्गाहरुको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो ।
महानगरले प्रति आना ४ लाख रुपैयाँदेखि प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ । महानगर वडा न १३ अन्तर्गत पर्ने बाटो नभएका जग्गाहरुको मुल्यांकन ४ लाख तोकिएको छ भने गोरेटो बाटो भएको जग्गाको प्रति आना ७ लाख र कच्ची बाटो भएको जग्गाको १२ लाख रुपैया तोकिएको छ।
त्यस्तै हनुमान ढोका, असन, इन्द्रचोक, खिचापोखरी, ठमेल, जमल, दरबारमार्ग, माइतिघर , त्रिपुरेश्वर, रानीपोखरी, पुतलीसडक, कमलपोखरी आसपासका जग्गाहरुको मुल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैया तोकिएको छ।
कुन ठाउँको जग्गाको मुल्यांकन कति ?
Prevलोकप्रिय बन्दै हेमन्त रानाको नयाँ गीत ‘माया बस्यो है’ (भिडियोसहित)
निहुँ खोज्छेस् ? ‘कमिनी बनाईदिम’ ?Next
काठमाडौंका महँगा निजी विद्यालयको मनोमानी, शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई भर्ना सुरु
काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट सात बालकको उद्धार